တိရစ်ဆာနျမြားကို ဖျေါညှနျးရာမှာ သုံးတဲ့ ထူးခွားသော အစုပွနာမျ ၁၁ ခု...
Home | ဘလော့ချ | တိရစ်ဆာနျမြားကို ဖျေါညှနျးရာမှာ သုံးတဲ့ ထူးခွားသော အစုပွနာမျ ၁၁ ခု
တိရစ်ဆာနျမြားကို ဖျေါညှနျးရာမှာ သုံးတဲ့ ထူးခွားသော အစုပွနာမျ ၁၁ ခု
အစုပြနာမ် Collective noun ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် အရာဝတ္ထုတွေ (သို့) လူတစ်ဦးချင်းတွေကို ညွှန်းဆိုရာမှာ အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ အစုပြနာမ်တွေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်းဟာ သင့်စကားကို ပိုပြီး သဘာဝကျစေပြီး မှတ်သားဖွယ်ရာလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အင်္ဂလိပ်စကားအဆင့်ကို ဒီတိရစ္ဆာန် အမည်ဆိုင်ရာအစုပြနာမ် ၁၁ ခုနဲ့ မြှင့်တင်လိုက်ကြရအောင်။
၁။ A sloth of bears
ဆောင်းတွင်း ဆောင်းအောင်းရာတွင် တုံ့နှေးခြင်းနဲ့ ဖြေးလေးစွာလှုပ်ရှားခြင်းတို့ဟာ ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ဝက်ဝံတွေရဲ့ အလေ့အထဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲ လူတွေက ဝက်ဝံတွေကို ပျင်းရိသော ဝက်ဝံအုပ်asloth of bears လို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်ပြီး sloth ဆိုတာကလည်း ပျင်းရိခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်။
E.g. There isasloth of bears living in this National Park. (ဒီအမျိုးသားဥယျာဉ်ထဲမှာ ဝက်ဝံအုပ်တစ်အုပ် ရှိပါတယ်။)
၂။ An obstinacy of buffalo
ကျွဲတွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ခေါင်းမာမှုနဲ့ တခါတရံမှာ ရန်လိုတတ်မှုတွေကြောင့် ထင်ရှားပါတယ်။ ဒီလိုကျွဲတွေအုပ်လိုက်ကို ခေါင်းမာတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလို့ ခေါ်နိုင်သလို obstinacy စကားလုံးကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က ခေါင်းမာတယ်ပေါ့။
E.g. Look! An obstinacy of buffalo is drinking water by the river. (ကြည့်စမ်း၊ ကျွဲအုပ်တစ်အုပ် မြစ်ဘေးမှာ ရေသောက်နေကြတယ်။)
၃။ A caravan of camels
ကုလားအုတ်တွေကို သဲကန္တာရထဲမှာ တစ်ကောင်ထဲသွားလာနေတာကို မြင်ရဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ သူတို့ဟာ အတူတကွနေထိုင်ရတာကို နှစ်သက်ပြီး အုပ်စုလိုက်လည်း ခရီးသွားကြတာ ယာဉ်တန်းတစ်ခုလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံရိပ်ကိုဖေါ်ပြနိုင်ဖို့ လူတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ကုလားအုတ် အုပ်စုတစ်စုကို ကုလားအုတ်ယဉ်တန်းတစ်တန်းလို့ အစုပြနာမ်အနေနဲ့ ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
E.g. He sawacaravan of camels carrying goods while he was crossing the Sahara. (ဆာဟာရ သဲကန္တာရကို သူဖြတ်တော့ ကုန်စည်တွေကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ ကုလားအုတ်ယဉ်တန်းတစ်တန်းကို သူမြင်ခဲ့ပါတယ်။)
၄။ A murder of crows
မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကျီးကန်းတွေက ဘယ်သူ့ကိုမှ မသတ်ကြပါဘူး။ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ လူတွေဟာ ကျီးကန်းတွေရဲ့ပုံရိပ်ကို ကံမကောင်းခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းတို့ဟာ ကျီးကန်းတွေအုပ်လိုက်ကိုamurder of crows လို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
E.g. Those gangsters are likeamurder of crows. They often bring bad luck to people in this village. (ဒီ လူဆိုးလူမိုက်တွေကတော့ ကျီးကန်းအုပ်လိုပါပဲ။ သူတို့ဟာ မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကို ကံမကောင်းခြင်းတွေ ယူလာပေးတတ်ပါတယ်။)
၅။ A convocation of eagles
လင်းယုန်တွေဟာ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှု၊ ခွန်အားတို့ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ အားကစားအဖွဲ့ချုပ်တော်တော်များများနဲ့ စစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဒီသတ္တဝါကို သူတို့ရဲ့လာဘ်ကောင်အဖြစ်ရွေးချယ် သတ်မှတ်ကြပြီး ၎င်းတို့ကိုaconvocation of eagles လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီမှာ convocation ဆိုတာ ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကျညီလာခံ၊ တွေ့ဆုံပွဲမျိုးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
E.g.: So cool! Fast, strong and ambitious! They’reaconvocation of eagles in this game. (အရမ်းမိုက်၊ မြန်ပြီး သန်လည်း သန်စွမ်း၊ ရည်မှန်းချက်လည်းကြီးပါ့။ သူတို့ဟာ ဒီကစားပွဲမှာ လင်းယုန်တို့ရဲ့ပွဲသဘင် (လင်းယုန်အုပ်) လိုပါပဲ။)
၆။ A parade of elephants
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးမားဆုံးသတ္တဝါဖြစ်တာနဲ့အညီ ဆင်တွေဟာ ၎င်းတို့အုပ်လိုက်အတူတကွ လမ်းလျှောက်သွားရင် မြေပြင်ကို အလွယ်တုန်ခါသွားစေပါတယ်။ ဒီခွန်အားကို အလေးပေးပြောချင်တာမို့ လူတွေကဆင်တွေကို ဆင်တို့စစ်ချီပွဲaparade of elephants လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ parade ဆိုတာ ချီတက်ခြင်း (သို့) ပွဲလမ်းအတွက် စုဝေးခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
E.g. Those trucks make noise likeaparade of elephants walking on the street. (ဒီကုန်တင်ကားတွေဟာ လမ်းပေါ်မှာလျှောက်သွားတဲ့ ဆင်တို့ ချီတက်ပွဲလိုပဲ အသံဆူညံစေတယ်။)
၇။ A business of ferrets
မြွေပါကတိုးဖြူတွေဟာ အကြာကြီးရပ်မနေနိုင်ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ အမြဲပဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးအတွက် ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေကြပြီး ကြည့်ရတာကလည်း စီးပွားရေးသမားတစ်ဦး အလုပ်များနေသလိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ လူတွေက သူတို့ကို မြွေပါကတိုးဖြူတွေရဲ့ အလုပ် A business of ferrets လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
E.g. They killedabusiness of ferrets to make that coat! That’sacrime! (သူတို့ဟာ အဲ့ဒီကုတ်အကျီကို ဖန်တီးဖို့ မြွေပါကတိုးဖြူတွေ အုပ်လိုက်ကို သတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာ ရာဇဝတ်မှုပဲ။)
၈။ A tower of giraffes
အရောင်ကြောင်ကြားကြားနဲ့ မြင့်မားရှည်လျားတဲ့သစ်ကုလားအုတ်တွေဟာ စားကျက်ကွင်းပြင် မြက်ခင်းပြင်တွေ အလယ်မှာ အပေါ်ကစီးမိုးနေတဲ့ ရွေ့လျားမျှော်စင်တွေလို ထင်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ လူတွေက ကုလားအုတ်တွေကို ကုလားအုတ်မျှော်စင်လို့ ခေါ်ကြတာ သံသယရှိစရာမလိုပါ။
E.g. My brother’s dream is havingatower of giraffes. They’re my brother’s most favorite animal. (ကျွန်တော့်အစ်ကိုရဲ့အိပ်မက်က သစ်ကုလားအုတ်မျှော်စင်တစ်ခု (သစ်ကုလားအုတ်တွေ အုပ်လိုက်) ရှိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော့်အကိုရဲ့ အကြိုက်ဆုံးသတ္တဝါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။)
၉။ A flamboyance of flamingos
ကြိုးကြာတွေဟာ အမြဲတမ်းပဲ သူတို့ရဲ့ လှပတဲ့အမွှေးအတောင်တွေနဲ့ ထူးခြားတဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားတွေကြောင့်ထင်ရှားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကျက်သရေရှိတင့်တယ်မှုကြောင့် လူတွေကလည်း ကြိုးကြာငှက်အုပ်တွေကိုaflamboyance of flamingos လို့ ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ flamboyance ဆိုတာ လှပခြင်း ၊ ထင်ရှားခြင်းကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
E.g.: I love our new dresses. We’re as gorgeous asaflamboyance of flamingos. (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဝတ်အစားသစ်တွေကို သဘောကျမိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကြိုးကြာငှက်တွေရဲ့ ဟိတ်ဟန်မျိုးနဲ့ ကြည့်ကောင်းနေတော့တယ်။)
၁၀။ A streak of tigers
အစင်းကြောင်းဆိုတာ သေးငယ်တဲ့မျဉ်းကြောင်း၊ လိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျားတစ်ကောင်မှာရှိသလို အစင်းကျားလိုင်းမျိုး တခြားဘယ်သူ့မှာရှိပါသလဲ။ ကျားရဲ့အစင်းကြောင်းတွေပါတဲ့ သားမွှေးက လူတွေဟာ ဘာ့ကြောင့်ကျားတွေကိုastreak of tigers လို့ခေါ်တာကို ရှင်းပြနေပါတယ်။
E.g. First, he was lost in this forest and then,astreak of tigers killed him. (သူဟာ ပထမတောထဲမှာ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ ဒီ့နောက် ကျားတွေရဲ့အစင်းကြောင်းက သူ့ကိုသတ်လိုက်တယ်။)
၁၁။ A pride of lions
ခြင်္သေ့တွေကို ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံးထင်မြင်စဉ်းစားမိတာက သူတို့ဟာ အသန်စွမ်းဆုံးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာ သူတို့ဟာ ဘုရင်ပါ။ လူတွေကလည်း ဒီလို ဂုဏ်သရေမျိုးကို အလေးပေးပြောဆိုချင်လို့ သူတို့ကိုapride of lions လို့ခေါ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
E.g. A pride of lions often has up to five females, two males and their young. (ခြင်္သေ့အုပ်တွေဟာ တခါတလေမှာ အမ ငါးကောင်၊ အထီးနှစ်ကောင်နဲ့ သူတို့ သားပေါက်လေးရယ်အထိ ရှိတတ်ကြတယ်။)